Shirkado Mashiinka Xidhmeeya Bacriminta otomaatiga ah iyo Warshad | YiZheng
Mashiinka Baako otomaatiga ah
Silsilad taagan Bacriminta C ...
Nooca Cusub ee Organic & Com ...
Qaybta Dabiiciga ah & Xarunta ...
Bacriminta Xarunta Rotary Drum ...
Iyadoo "deg deg ah, sax ah, xasilloon", ah mashiinka baakadaha oo otomaatig ah wuxuu leeyahay kala duwanaansho ballaaran oo sax ah, oo la jaan qaadaya qalabka wax lagu qaado iyo mashiinka harqaanka si loo dhammaystiro geeddi-socodkii ugu dambeeyay ee khadka wax soo saarka ee bacriminta ganacsiga iyo bacriminta isku dhafan.
Waa maxay Mashiinka Baakadaha Tooska ah?
Mashiinka Baakadaha ee Bacriminta waxaa loo isticmaalaa in lagu duubo pellet bacriminta, oo loogu talagalay xirmaynta agabka ee agabyada. Waxaa ku jira laba nooc oo baaldi ah iyo hal baaldi oo keliya. Mashiinka wuxuu leeyahay astaamaha qaabdhismeedka isku dhafan, rakibida fudud, dayactirka fudud, iyo saxsanaanta tiro aad u sarreysa oo ka hooseysa 0.2%.
Iyada oo "deg deg ah, sax ah oo xasilloon" - waxay noqotay doorashada ugu horreysa ee lagu xirayo warshadaha wax soo saarka bacriminta.
1. Baakadaha la adeegsan karo: waxay ku habboon yihiin bacaha tolida, bacaha xaashida jawaanka, bacaha dharka iyo bacaha balaastigga ah, iwm.
2. Waxyaabaha: 304 ahama ayaa loo isticmaalaa qaybta xiriirka ee maaddada, taas oo leh caabbinta daxalka sare.
Qaabdhismeedka Mashiinka Baakadaha Tooska ah
Automatic packing machine waa jiil cusub oo mashiinka baakadaha caqliga leh oo ay soo saartay shirkadeena. Waxay inta badan ka kooban tahay aaladda miisaanka otomaatiga ah, aaladda gudbinta, qalabka tolidda iyo baakadaha, xakamaynta kumbuyuutarka iyo afar qaybood oo kale. Nooca korantada ayaa leh faa iidooyinka qaab dhismeedka macquulka ah, muuqaalka quruxda badan, howlgalka xasilloon, keydinta tamarta iyo miisaanka saxda ah. Mashiinka baakadaha otomaatiga ah waxaa sidoo kale loo yaqaanaa cabbirka baakadka kumbuyuutarka, mashiinka ugu weyn wuxuu qaataa dhaqso, dhexdhexaad iyo gaabis ah seddex xawaareyn iyo qaabeyn isku dhafan quudin gaar ah. Waxay isticmaashaa tiknoolajiyad beddelaad dijitaal ah oo casri ah, tikniyoolajiyadda farsamaynta muunad qaadashada iyo tikniyoolajiyadda ka hortagga faragelinta si loo xaqiijiyo magdhow qalad otomaatig ah iyo saxitaan.
Codsiga Mashiinka Baakadaha otomaatiga ah
1. Qeybaha cuntada: abuurka, galleyda, qamadiga, soyska, bariiska, buckwheat, sisinta, iwm.
2. Qaybaha bacriminta: qaybaha quudinta, bacriminta dabiiciga ah, bacriminta, ammonium fosfateerka, walxaha waaweyn ee urea, ammonium nitrate fara badan, bacriminta BB, bacriminta fosfate, bacriminta basasha iyo bacriminta kale ee isku dhafan.
3. Qeybaha kiimikada: ee loogu talagalay PVC, PE, PP, ABS, polyetylen, polypropylene iyo waxyaabo kale oo granular ah.
4. Noocyada cuntada: caddaan, sonkor, cusbo, bur iyo noocyo kale oo cunto ah.
Faa'iidooyinka Mashiinka Baakadaha otomaatiga ah
(1) Xawaaraha baakadka degdega ah.
(2) Saxsanaanta tirada waxay ka hooseysaa 0.2%.
(3) Qaab dhismeed isku dhafan, dayactir fudud.
(4) Mashiinka wax lagu kala qaado oo leh tiro aad u tiro badan iyo saxnaan sare.
(5) Kordhi dareemayaasha soo dejinta iyo soo dejiyeyaasha hawadu qabato, oo si kalsooni leh u shaqeeya isla markaana si fudud u ilaaliya.
Astaamaha Mashiinka Rarista & Quudinta
1. Waxay leedahay awood gaadiid oo waawayn iyo masaafad gaadiid oo dhaadheer.
2. Hawlgal xasilloon oo heer sare ah.
3. Lebis isku mid ah iyo soo saaris joogto ah
4. Cabbirka haadiyaha iyo nooca mootada ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo awoodda.
Qalabka Mashiinka Baakadaha otomaatiga ah Muuqaalka Muuqaalka
Xulka Mashiinka Mashiinka Baakadaha otomaatiga ah
Model YZBZJ-25F YZBZJ-50F
Culeyska Miisaanka (kg) 5-25 25-50
Saxnimada (%) 0.2-0.5 0.2-0.5
Xawaare (bac / saacad) 500-800 300-600
Awood (v / kw) 380 / 0.37 380 / 0.37
Miisaan (kg) 200 200
Isugeynta Guud (mm) 850 × 630 × 1840 850 × 630 × 1840
Hore: Raritaanka & Mashiinka Quudinta
Xiga: Mashiinka Mashiinka Baakadaha Labaad ee Labaad
Hordhac Waa maxay Mashiinka Rarista & Quudinta? Adeegsiga Mashiinka Badeecadda & Quudinta sida bakhaarka alaabta ceeriin ee geeddi-socodka wax soo saarka iyo bacriminta bacriminta Sidoo kale waa nooc ka mid ah qalabka gudbinta ee loogu talagalay qalabka waaweyn. Qalabkani ma soo gudbin karo oo keliya qalabka wanaagsan ee leh walxaha ka yar 5mm, laakiin sidoo kale wax badan ...
Ku marooji Kala-soocid adag oo dareere ah
Hordhac Waa maxay Kala-soocidda Kala-saaridda dareeraha adag? Kala-soocidda Kala-baxa Qalabka-Sunta-dareeraha ah waa qalab farsamo oo cusub oo biyo-soo-saaris ah oo lagu soo saaray iyada oo la tixraacayo qalab kala-soocid horumarsan oo kala duwan oo gudaha iyo dibedda ah isla markaana lagu darayo khibradeena R&D iyo soo-saarista. Ku marooji Extrusion adag-dareere Separato ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Wareega Wareega Bacriminta Mashiinka? Bacriminta dabiiciga ee asalka ah iyo granules bacriminta isku dhafan waxay leeyihiin qaabab iyo cabirro kala duwan. Si looga dhigo jajabyada bacriminta waxay u muuqdaan kuwo qurux badan, shirkadeena waxay soo saartay mashiinka nadiifinta bacriminta dabiiciga ah, mashiinka nadiifinta bacriminta iyo sidaas ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Dufcadda Bacriminta Joogtada ah? Nidaamka isdabajoogga ah ee otomaatiga ah waa qalab otomaatig ah oo si toos ah u shaqeyn kara oo la shaqeyn kara qalabka bacriminta BB, qalabka bacriminta dabiiciga ah, qalabka bacriminta isku dhafka ah iyo qalabka bacriminta isku dhafan, wuxuuna dhameystiri karaa saamiga otomaatiga ah sida uu yahay macaamilka ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Mashiinka Quudinta ee Iskudhafka Gawaarida ah ee loo isticmaalo? Mashiinka Mashiinka Quudinta Isku-dhafan ee Vertical Disc ayaa sidoo kale loo yaqaan 'disc feeder'. Dekedda dheecaanku waa la xakamayn karaa dabacsan oo tirada dheecaanku waa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo baahida wax soo saarka dhabta ah. In line-soo-saarka bacriminta xarunta, Vertical Disc Mixin ...
Hordhac Waa maxay Kala-bixiyaha Sieving Solid-dareere adag? Waa qalab loogu talo galay ilaalinta deegaanka oo loogu talagalay saxarada fuuqbaxa digada digaaga. Waxay u kala sooci kartaa wasakhda wasakhda ah iyo tan xaarka wasaqda xoolaha una geyn kartaa bacrimin dabiici ah iyo bacrimin adag oo dabiici ah Bacriminta dabiiciga ah ee dareeraha ah ayaa loo isticmaali karaa dalagga ...